DDS: Shuruudo lagu soo rogay dadka qabanaya xilalka gobolada – AwKutub News
DDS: Shuruudo lagu soo rogay dadka qabanaya xilalka gobolada
By awkutubnews September 15, 2018 September 15, 2018
Leave a Comment on DDS: Shuruudo lagu soo rogay dadka qabanaya xilalka gobolada
Qeybo ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida ayaa laga dareemayaa in gaabis uu ku yimid hawlihii Dowladda Deegaanka kaddib isbadalkii dhawaan halkaasi ka dhacay.
Laga billaabo 26-kii bishii hore, waxaa meesha ka baxay inta badan maamulkii hore ee Dowlad Deegaanka Soomaalida ka dib markii ciidammada federaalka ay maamulka soo farageliyeen.
Balse waxaa soo baxaya warar ah in shaqaalihii dowladda xitaa aysan helin mushaaraadkooga, iyadoo meelaha qaar bangiyadu xitaa aysan shaqeynayn.
Dhanka kale waxaa soo baxaya shuruudo cusub oo lagu xirayo cidda qabanaysa xilalka degmooyinka iyo gobollada dowlad deegaanka Soomaalida.
Shuruudaha cusub ee la soo rogay
Xasan Maxamed Xuseen oo ah madax xafiiseedka madaxtooyada Dowlad Deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in xisbiga haya talada Deegaanka ay shuruudo ku soo rogeen cidda qabanaysa xilalka degmooyinka iyo gobollada dowlad deegaanka Soomaalida.
Shuruudahani ayaa waxaa ka mid ah
1: in qofka uu haysto shahaadada koowaad ee jaamacadda.
2: in uu qofka leeyahay waayo aragnimo iyo khibrad shaqo.
3: in uu yahay qof bulshada sumcad ku dhex leh.
4: in uu yahay qof aan lagu soo eedeeyn musuqmaasuq.
Waxyaabaha kale ee la isku xirayo waxaa ka mid “in uusan ka soo qayb qaadaanin hagardaamooyiinkii bulshada lagu soo hayay,” sida uu BBC u sheegay madax xafiiseedka madaxtooyada Dowlad Deegaanka Soomaalida.
Tags: DDS Itoobiya Wararka
Previous Entry Aqal Sare oo soo saaray Liiska Wufuuda loo dirayo Maamul Goboleedyada
Next Entry Daraasad : Dharka Cusub Oo Aan La Maydhin Waxaa Laga Qaadaa Cudurro Dhanka Maqaarka Ah